मेलम्चीको पानी ल्याउन कुन दलको सरकारले कति काम गरे ? – रुपान्तर
मुख्य पृष्ठअर्थ/बाणिज्यमेलम्चीको पानी ल्याउन कुन दलको सरकारले कति काम गरे ?
लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकावासीले प्रतीक्षा गरेको मेलम्चीको पानी उपभोक्ताको घर–घरमा पुग्न थालेको छ । गत फागुन २२ गते सुन्दरीजलको प्रशोधन केन्द्रमा हालिएको पानी शुक्रबारदेखि विभिन्न स्थानमा बनाइएका वितरण केन्द्रमा पठाइएको थियो । तिनै वितरण केन्द्रमा संकलन गरिएको पानी उपभोक्ताको घरमा पठाइने भएको हो । अहिले मेलम्चीको पानी सर्वसाधारणको घर–घरमा पुग्दा यसको इतिहास भने सर्वसाधारणले सम्झिनैरहने छन् । ०३०/३१ देखि नै उपत्यकाभित्र र बाहिरका सतहगत स्रोतहरू अध्ययन गरी उपत्यकामा खानेपानी परिपूर्तिलाई सहज तुल्याउने प्रयास सुरु भएपछि काठमाडौंबासीले सम्झिने शब्द बन्न पुग्यो मेलम्चीको पानी ।०४८ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने घोषणा गरेका थिए ।
त्यसपछि यसबीचमा विभिन्न काम भए तर समयमा नै पानी आउन नसक्दा सर्वसाधारणले यसलाई उखान नै बनाए मेलम्चीको पानी ।तर भट्टराईले घोषणा गरेको करिब २७वर्षपछि घरघरमा पानी आएपछि सर्वसाधारण हर्षित भएका छन् । मेलम्चीको पानी घरघरमा पु¥याउने काम भने त्यति सहज थिएन । सिन्धुपाल्चोकदेखि काठमाडौंसम्मको सुरुङ र अन्य कार्य निकै कठिन थियो । यसबीचमा मुलकले १९ वटा प्रधानमन्त्री पायो, जसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराईदेखि केपी ओलीसम्म रहेका छन् ।
कुन समयमा के–काम भए ?
मेलम्चीको ५० वर्ष लामो पुरानो यात्रालाई फर्केर हेर्ने हो भने यसबीचमा निकै उतारचढाव आए, मुलुक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा बदलियो । तर मेलम्चीको आशा भने कहिले परिवर्तन भएको थिएन । ०५५ सालमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भएपछि ०५६ सालमा मात्र एडिबीको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । त्यतिबेला मुलुकमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि ०५८ मा मेलम्चीको निर्माण सुरु भएको थियो भने हेनिल कोनको जेभीलाई सुरुङ बनाउन चाहिने प्रवेशमार्ग निर्माणको ठेक्का पनि दिइएको थियो । तर काम गर्न असमर्थ रहेको भन्दै ठेक्का सम्झौताको तीन वर्षपछि अर्थात् ०६१ हेनिलले एकलौटी ठेक्का तोड्यो । सो समयमा मुलुकमा देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए । त्यसपछि भने शाही आयोगमार्फत तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले हस्तक्षेप गरेपछि मेलम्चीबाट नर्वे र स्विडेनको सिडले सहयोग फिर्ता लिएको थियो ।
अन्यौलमा नै रहेको मेलम्ची आयोजनालाई अघि बढाउनका लागि ०६४ सालमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड गठन गरियो र २७ किमि सुरुङ खन्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरियो । आयोजनाको महत्वपूर्ण कडिरुपमा मानिएको सुरुङ खन्ने कामको सुरुवात प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो । उनकै कार्यकालमा चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन सिआरसीलाई सुरुङ खन्ने ठेक्का दिइएको थियो । त्यस्तै आयोजनालाई प्रमुखकताका साथ अघि बढाउनका लागि ०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारद्वारा मेलम्चीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको थियो । विभिन्न उतारचढावका बाबजुद ०६९ सालमा सुरुङ निर्माणको काम १५ प्रतिशत मात्रै सकिएपछि सिआरले ठेक्का रद्द गरेको थियो र पुनः टेन्डर आह्वान गर्दै इटालियन कम्पनी सिएमसीलाई बाँकी कामको जिम्मा दिइएको थियो । मेलम्चीको काम तीव्रतर ढंगले अघि बढ्दै गर्दा नेपालमा गएको विनासकारी भूकम्प अवरोध ग¥यो । त्यसबेला भने करिब एक वर्ष सुरुङ खन्ने काम रोकियो । ठेक्काअनुसार ०७३ मा काम सक्नुपर्ने भए पनि भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण काम रोकियो र सिएमसीको म्याद थप भइरह्यो ।
अन्तिम म्यादअनुसार ३ फागुन ०७५ मा सिएमसीले काम सक्नुपर्ने थियो । तर, २९ मंसिरमै सिएमसीले काम छाड्यो र आयोजनाले २४ माघमा ठेक्का सम्झौता रद्द ग¥यो । यसबीचमा तत्कालिन खानेपानी मन्त्री बिना मगरले बाँकी काम सरकारले नै गर्ने घोषणा गरिन् । तर पछिल्लो पटक चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले सुरुङको बाँकी काम सम्पन्न गरेको हो । सोही कम्पनीले ‘हेडवर्क’ निर्माण गरिरहेको छ । मगर खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त भएको २५ दिनपछि बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ मार्ग खन्ने काम सकियो । २७ चैत ०७४ मा सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु भयो । त्यस बखत आयोजनाले गरेको ६ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने काम नै ऐतिहासिक भएको मानिँदै आएको छ ।
मेलम्ची आयोजना सफल हुनुमा आ–आफ्नै दाबी
तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले ०४८ सालको चुनाव प्रचारको क्रममा ‘म मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंको सडक पखाल्छु’ भनेका थिए । भट्टराईको घोषणासँगै मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग राजधानीबासीको सपना जोडियो । विविध वाधा–अवरोध हटाउँदै मेलम्चीको पानी सर्वसाधारणको धारमा आइपुग्दा यसको जस लिने होड चलेको छ । ०४८ सालमा सबै अध्ययन सकिएको मेलम्चीको पानी राजधानी आइपुग्दा नेपालमा १८ जना व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री भए । सबै सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकता त दिए, तर व्यवहारमा यो आयोजना त्यति धेरै तीव्र गतिमा अघि बढ्न सकेन । आयोजनाको विकासक्रमलाई हेर्दा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड गठन भएदेखि नै तीव्र रुपमा अघि बढेको देखिन्छ । भने अन्तिम चरणमा सुरुङको फिनिसिङ गर्ने काम भएको देखिन्छ ।
पिउन योग्य पानी धाराधारामा
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयूकेएलले पहिलो चरणमा आइतबारदेखि मेलम्चीको पिउन योग्य पानी धाराधारामा पठाएको छ । केयूकेएल अन्तर्गत उपत्यकाभर १ लाख ८० हजार धारा छन् । अहिले आएको १७ करोड लिटर पानी यी सबै धारामा भने नपठाइने केयूकेएलले जनाएको छ । परीक्षणका सबै काम सकिएपछि मात्रै घर घरमा पानी आउने छ ।उपत्यकामा १० वोटा ट्यांकी निर्माण गरिएको छ । जसमध्ये नौ ओटा ट्यांकी तयारी अवस्थामा छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पहिलो चरणको पानी धारामा पठाइसकेपछि दोस्रो चरणमा चक्रपथ रिङरोड बाहिरका क्षेत्रमा पानी पठाउने केयूकेएलले जनाएको छ ।